काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि ९० दिनसम्मका चल्ने नयाँ अफर नयाँ अफर सार्वजनिक गरेको छ । स्प्रिङ अफरको नाम दिइएको उक्त अफर टेलिकमले शनिबारबाट ल्याएको हो । विभिन्न प्याकेजसहित उपलब्ध उक्त अफरभित्र एक घण्टे अनलिमिटेड प्याक पनि रहेको छ । जस अन्तर्गत कम्पनीकै नेटवर्कमा जीएसएम-सीडीएमएका ग्राहकले मात्र २० रुपैयाँमा प्याक एक्टीभ गरेपछि एक घण्टासम्म निरन्तर भ्वाइस, एसएमएस र डाटा असीमित प् ... read more...
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपाल सरकारले नयाँ वर्ष २०७६ बैशाख १ गते देखि घोषणा गर्न लागेको ‘समृद्धसँग जोडौं नाता: सबै नेपालीको बैंक खाता’ अभियान अन्र्तगत 'सबै नेपालीको बचत खाता' शिर्षकको नयाँ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारले शुरु गर्न लागेको अभियानलाई सघाउने उद्धेश्यले बैंक खाता नहुने नेपाली नागरिकहरुलाई लक्षित गरि ग्लोबल आइएमई बैंकले नयाँ बचत खाता शुरु गरेको हो । आगामी ... read more...
काठमाडौँ । महसुल निर्धारणका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा झन्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । लोडसेडिङका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुने केही उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई ‘अस्वाभाविक रूपमा महसुल छुट दिएको’ भेटिएको हो । छानबिन गरी झन्डै आठ महिना गोप्य राखिएको प्रतिवेदनमा ‘बिलिङमा भएको गडबडीले नोक्सान भएको रकम ४ अर्ब २९ करोड ३८ लाख ६१ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ हुन ... read more...
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र सुमेरु सिटी हस्पिटल प्रालिबीच एक सम्झौंता भएको छ । उक्त सम्झौंता अनुसार हस्पिटलले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरुमा सेवाग्राहीलाई छुट प्रदान गरिनेछ । बैंकले अस्पतालसँग आफ्ना ग्राहकलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय उपचारमा सहुलियत दिने उदेश्यले दुई पक्षीय सम्झौता गरेको जनाएको छ । उक्त सम्भौतापत्रमा सुमेरु सिटी हस्पिटल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल डंगोल र ग्लोब ... read more...
करोडौं लगानी: सायद, दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट क्लब ‘लड’
२०७५ चैत्र २३ गते १२:५७
काठमाडौं । क्लबको नामै गजबको छ-‘लड’ अफ ड्रिक्स अर्थात पिउने भगवान र छोटकरीमा ‘लड’ । सन् २०२० लाई मध्येनजर गर्दै नेपाली युवा ब्यवसायीहरुले पर्यटकीय स्थल ठमेलमा नयाँ क्लब ‘लड’ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । करिब १५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको उक्त क्लब मुलुकको मात्र नभई दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट क्लब रहेको प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । आधा दर्जन बढी युवा ब्यवसायीहरुको लगा ... read more...
एनआइसीका १५ चमत्कारिक बचत निक्षेप योजना
२०७५ चैत्र २३ गते १२:१३
पोखरा । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो वित्तीय संस्था एनआइसी एसिया बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न १५ चमत्कारिक बचत निक्षेप योजना ल्याएको छ । बैंकले २१ वर्ष पुरा गरी २२ वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न चमत्कारिक योजना ल्याएको हो । सबै खालका ग्राहकलाई समेट्ने गरी चमत्कारिक बचत योजना ल्याइएको बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख दीपेन्द्र शर्माले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । चमत्क ... read more...
सहकारीबाटै माथि उठेका ब्यवसायी बस्नेत जसको कारण सकिए
२०७५ चैत्र २० गते २१:५४
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले विवादास्पद ब्यवसायी सुधिर बस्नेतलाई पुनः पक्राउ गरेको छ । यसअघि पनि पक्राउ परी लामोसमय जेलमा बसेर छुटेका बस्नेतलाई प्रहरीले उनकै निवासबाट बुधबार साँझ पक्राउ गरेको हो । मैतीदेवी पुलसँगै ओरियण्टल कोअपरेटिभबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका बस्नेत महत्वकांक्षी बन्दै जाँदा घरजग्गा, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ , अग्नी यातायात हुँदै अग्नी एयरमा समेत लगानी गरेका थिए । काम ... read more...
ग्लोबल आइएमई बैंकको एकैपटक ५ स्थानमा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु
२०७५ चैत्र २० गते १७:२७
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले एकैपटक विभिन्न जिल्लाहरुमा पाँच वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनम ाल्याएको छ । बैंकले रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका-३, इरिवाङ्गमा १२२ औँ, सोही जिल्लाकै थवाङ्ग गाउँपालिका-२ स्थित ठुलोगाँउमा, ईलामको शुर्योदय नगरपालिका-१४ स्थित कट्टुसेमा, सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका-९ स्थित पत्थरगाडामा र पाँचथरको हिलिगाँउ गाउँपालिका-२ स्थित सिङ्गापुरमा १२६औँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा स ... read more...
नुवाकोट । ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सुरु गरेको छ । बैंकले आफ्ना विभिन्न ग्राहकहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन थालेको हो । एक कार्यक्रमबीच बैंकले त्रिशुली शाखा, नुवाकोटवाट ६ जना भूकम्प पीडितलाई निजि आवास निर्माण कर्जा वितरण गरेको हो । उक्त कर्जा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रदान गरे । स ... read more...
एटिएम मेशिन फुटाउँदै गरेको अवस्थामा दुई जना रंगेहात समातिए
२०७५ चैत्र १८ गते १३:१५
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी बृत्त कमलपोखरीले नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकको एटिएम मेशिन फुटाउँदै गरेको अवस्थामा २ जना पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा उदयपुर स्थायी घर भई काठमाडौं बानेश्वर बस्ने बर्ष १८ का अशोक पुरी र काभ्रे घर भई बानेश्वर बस्ने बर्ष २२ का सोनाम गुरुङ रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका-१ कमलपोखरी ल्होत्से चोकस्थित ईन्भेष्टमेण्ट बैंकको एटिएम फोर्दै गर्दा प्रहरीले पुरी र गुरुङलाई पक्र ... read more...
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्मेलन नेपालको आयोजनामा नेपाललगायत विश्वका आठ वटा राष्ट्रको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार सम्मेलन हुने भएको छ । उक्त सम्मेलन कतारमा हुन गइरहेको आयोजकले जनाएको छ । आगामी २८ अप्रिलदेखि मे १ सम्म हुने उक्त सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि आयोजकले बताएको छ । नेपालबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिने प्रतितिधिहरुको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको पनि आयो ... read more...
गाईघाट । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्दै लगे पनि विद्युत् आपूर्तिको कारण समय-समयमा सिमेन्ट उत्पादनमा समस्या झेल्दै आएको छ । डेढ वर्षदेखि सिमेन्ट उत्पादनमा फड्को मार्दै आएको उदयपुर सिमेन्ट देशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग हो । एक महीनासम्म धनुषा ढल्केबर क्षेत्रबाट सिमेन्ट उद्योगमा आपूर्ति हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको कारण सिमेन्ट उत्पादनमा ह्र ... read more...
काठमाडौं । साना बालबच्चाको स्वास्थ्य र स्याहर-सुसार सम्बन्धि विभिन्न ब्राण्डका उत्पादनहरु नेपालको पहिलो प्रिमियम आउटलेट आईएमएस लिटिल स्माइल्स्ले आफ्नो नयाँ शोरुम कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरमा सुरु गरेको छ । उक्त नयाँ शोरुममा डक्टर ब्राउन्स्, क्रेन, हिमालय बेबी केयर र डिजेआईजस्ता विश्वप्रशिद्ध ब्राण्डका उत्पादनहरु पाईने कम्पनीले जनाएको छ । यि ब्राण्डका उत्पादनहरु जस्तैः साबुन, मसाज तेल, पाउडर, स ... read more...
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले सल्यान जिल्लाको श्रीनगरस्थित आफ्नो नयाँ शाखा कार्यालयको सुरु गरेको छ । श्रीनगर र त्यस वरपरका बासिन्दालाई सेवा पुर्याउने उदेश्यले नयाँ शाखा कार्यालय खोलिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त शाखा कार्यालयको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री ज्वालाले श्रीनगर तथा वरपरको क्षेत्रको आर्थिक विका ... read more...
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले कैलालीको अत्तरियास्थित आफ्नो नयाँ शाखा कार्यालय सुरु गरेको छ । कैलाली जिल्लाको अत्तरिया र त्यस वरपरका बासिन्दालाई सेवा पुर्याउने उद्धेश्यले खोलिएको उक्त शाखाको पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्टले उद्घाटन गरेका थिए। शाखाको औपचारिक उद्घाटन गर्दै सांसद भट्टले अत्तरियालगायत देशका अन्य स्थानहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बिस्तार गरेको सेवा सञ्ज ... read more...
काठमाडौं । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले आजदेखि टाटा मोटर्स कन्स्ट्रक्सन एक्सपोको शुभारम्भ गरेको छ । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त एक्स्पो सिप्रदीको नैकापस्थित कर्पोरेट अफिसको प्रांगणमा आयोजना भइरहेको छ । एक्स्पोमा टाटा मोटर्सका निर्माण कार्य सम्बन्धी सवारी साधन, उपकरण र अन्य मेसिनहरु प्रदर्शनमा राखिएका छन् । सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठका अनुसार एक्स्पोमा आउने दर्शकहरुले टाटाका ... read more...
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल लाइफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि ग्लोबल आईएमई बैंक १३४ वटै शाखाहरुमार्फत नेपाल लाइफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीले जीवन बीमा योजनाहरु खरिद गर्नुका साथै जीवन बीमा सम्बिन्ध सम्पूर्ण सेवाहरु छिटो, छरितो एवम् भरपर्दो माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा ग ... read more...
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिशूली ‘बी’ को शेयर खरीद गरी जनताको शेयर आवेदन शुभारम्भ गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले १० हजार कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका छन् । उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्यले १० हजार, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले एक हजार र पूर्वसभामुख ओन ... read more...
न्यूयोर्क । अमेरिकी मनोरञ्जन कम्पनी डिज्नेले फक्सको मनोरञ्जन व्यवसाय ७१ अर्ब अमेरिकी डलरमा खरिद गर्नेसम्बन्धी सम्झौतालाई टुङ्गो लगाएको छ । यो सम्झौतासँगै फक्सका उत्पादनहरु 'सिन्डेरेला', 'दी सिम्पसन्स', 'स्टार वार्स' र 'डा. स्ट्रेन्ज' अब एकै कर्पोरेट छानामुनि आउने छन् । यो सम्झौताले विश्व मिडिया परिदृश्यमै हलचल ल्याउने छ । सम्झौतापछि डिज्नेलाई आफ्नै स्ट्रिमिङ सेवा डिज्ने प्लस यसै वर्षको अन्त्यतिर आ ... read more...
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने विश्व विख्यात संस्था आईडीपी एजुकेशनले नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएको आईईएलटिएस परिक्षाको शुल्कको भुक्तानी अबदेखि इसेवामार्फत गर्न सकिने बताएको छ । अनलाइन भुक्तानीसम्बन्धि सम्झौतापत्रमा आईडीपी आईइएलटिएसका नेपाल प्रमुख कविर खड्की र इसेवा फोनपे प्रालिका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन लामिछानेबीच हस्ताक्षर भएपछि यो संभव भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै ... read more...